लाईफस्टाइल​ | Digital Dainik | Page 3
दाह्री ग्याङ हिट,दाह्री पाल्नुका ९ फाइदाहरु यी हुन्
दाह्री ग्याङ हिट,दाह्री पाल्नुका ९ फाइदाहरु यी हुन् काठमाडौं: विशेषगरी पुरुषहरुले आफ्नो दाह्री फेसनको रुपमा राख्ने गर्दछन् । अहिले त दाह्री पाल्ने ट्रेन्ड नै चलेको छ भन्दा फरक नपर्ला । सामाजिक सन्जालमा दाह्री ग्याङ अहिले हिट छ । हजारौं युवाहरु यो पेजमा रहेका छन् । दाह्री पाल्ने र पाल्न रुचि राख्ने युवाहरु यस पेजमा संलग्न रहेका छन् । देशभरि नै दाह्री ग्याङ सक्रिय छ । यसले विभिन्न समाजसेवाका कामहरु समेत गरिरहेको छ । केहि दिन अघि मात्र विप्लव नेतृत्वको माओवादीले गरेको नेपाल बन्दको विरोध गर्दै उक्त समूह सडकमा निस्किएको थियो । दाह्री ग्याङका सदस्यमध्येका एक कृष्णा सुन्दासले आफूले १५ वर्षको उमेरदेखि नै कपाल र …
सधै जवान देखिन मन छ ? यी टिप्सहरु अपनाउनुस्
सधै जवान देखिन मन छ ? यी टिप्सहरु अपनाउनुस् काठमाडौँ, कार्तिक २०: मानिसहरुलाई सधै आफू जवान देखिने मन हुन्छ । खानपान र व्यायाममा ध्यान दिने हो भने मानिसहरु आफ्नो वास्तविक उमेरभन्दा कम नै देखिन सक्छन् । स्वस्थ खाना खाने,प्रशस्त पानी पिउने,म्वाइस्चराइजिङ क्रिम लगाउने,हर्बल र ग्रिन टी रोज्ने,नियमित व्यायाम गर्ने र तनावरहित जीवन बाँच्नेहरु सधै जवान देखिन्छन् । छालामा चाउरी नपरोस् भन्नका लागि स्वस्थ र ताजा खाना खाने गर्नुपर्छ जसले नयाँ कोषिका सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । नयाँ कोषिकाले छालाको चमक कायम राख्छ । शरीरमा पानीको मात्रा कम भयो भने छाला रुखो हुने, सुखा हुने गर्दछ । जसले गर्दा छाला नराम्रो हुन्छ । छाला …
नाङगै सुत्नु के–के छन् त फाइदा ?
नाङगै सुत्नु के–के छन् त फाइदा ? काठमाडौँ, कार्तिक ३: सुत्ने सबैको आ–आफ्नै तरिका हुन्छ । कोही कपडा लगाएर सुत्छन् भने कोही कपडा नलगाई । एक अनुमानअनुसार १० प्रतिशत मानिसहरु नाङगै सुत्छन् । तिनीहरुले वास्तवमै सही गरेका हुन्, किनभने विना कपडा सुत्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक पनि छ । के–के छन् त फाइदा ? पार्टनरसंग नाङगै सुत्दा छालाको प्रत्यक्षसम्पर्कले अक्सिटोसिन हर्मोन निस्कन्छ । बन्डिङ हर्मोन पनि भनिने यसले मानिसमा खुशीको मात्रा बढाइदिनुका साथै तनाव र उच्च रक्तचापलाई घटाउन मद्दत गर्छ । नाङगै सुत्दा ढुसीको संक्रमण पनि घटाउँछ । महिलाहरुको यौनांगमा हावाको प्रवेशले संक्रमण हुन दिँदैंन र …
दसैँमा मासु कसरी खाने, यस्तो छ डाक्टरको सुझाव
दसैँमा मासु कसरी खाने, यस्तो छ डाक्टरको सुझाव काठमाडौँ, असोज १४: दसैँको रौनक घरसम्म आइपुगेको छ । दसैँका लागि घरजाने क्रम सुरु भएको छ । रातो टीका र जमराको पर्वको रुपमा चिनिने दसैँमा खानपानको पनि उत्तिकै महत्व छ । दसैँ भन्नेबित्तिकै मासुको कुरा पनि आइहाल्छ । दसैँमा पेटभरि मासु नखाए कहिले खाने भन्नेहरु धेरै छन् । तर दसैँमा मासु र अन्य खानेकुरा खाँदा बिरामी मात्र होइन स्वस्थ मानिस पनि बिरामी बन्ने अत्यधिक सम्भावना रहन्छ । खानपिनमा ध्यान नदिँदा धेरै नागरिक दसैँका समयमा अस्पतालमा पुग्ने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुन बताउँछन् । खानपिनमा सामान्य ध्यान …
स्वस्थ खानपान र जीवनशैलीले मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ
स्वस्थ खानपान र जीवनशैलीले मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ काठमाडौँ, असोज ८: मानिसले स्वस्थ खानपिन गर्ने, व्यायाम गर्ने र आफ्नो जीवनशैलीमा ध्यान दिएमा सम्भावित मुटुरोगबाट बच्न सकिने मुटुरोग विशेषज्ञले बताएका छन् । शनिबार नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले विश्व मुटु दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अस्पतालका मुटुरोग विभाग प्रमुख तथा मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा डा यादव भट्टले मद्यपान नगर्ने र दैनिक आचरणमा ध्यान दिने हो भने मुटुसम्बन्धी समस्याबाट बच्न सकिने बताए । उपयुक्त उपचार, नियमित औषधि सेवन र स्वस्थ जीवनशैलीले मुटु रोगबाट बच्न सकिने उनको भनाइ छ । मुटुरोग शल्यचिकित्सक डा ज्योतिन्द्र शर्माले धेरै …
धेरै सुत्ने मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असर, कुन उमेर समूहलाई कति सुत्दा उत्तम
धेरै सुत्ने मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असर, कुन उमेर समूहलाई कति सुत्दा उत्तम एजेन्सी: निन्द्रा मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । पर्याप्त निन्द्रा भएमा शरिर फूर्तिलो हुन्छ । कुनै कामले निन्द्रामा असर गर्यो र पर्याप्त निन्द्रा पुगेन भने त्यसले प्रत्यक्ष क्रियाकलापमा समेत असर गर्ने गर्दछ । त्यसैले सुत्ने तरिका मर्यादित बनाउनु जरुरी रहेको छ । एउटै रुटिङ्गमा सुत्ने बानी गर्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हुन्छ । कम समय सुत्यो भने शरिर फूर्तिलो हुँदैन । र बढी सुत्यो भने पनि झन् त्यसले स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । उमेरले पनि मानिसको निन्द्राको आवश्यकतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारण गर्ने गर्दछ । मानिसको उमेर अनुसार सुत्ने समय …
अरु व्यायामभन्दा योग नै किन ?
अरु व्यायामभन्दा योग नै किन ? सवै मानिस आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छन् । स्वस्थ्य रहनका लागि मानिस बिहानबिहानै दौडिनेदेखि लिएर जिम जानेसम्म गर्छन् । तरपनि आफूलाई पूर्णरुपमा स्वस्थ राख्न सकिरहेका छैनन । विभिन्न किसिमका खेलहरुमध्ये ब्याडमिन्टन, कराँतेलगायतका खेल पनि मानिस स्वस्थ्य रहने उपायकै रूपमा लिन्छन् । स्वस्थ्य रहन अपनाइने यस्ता अभ्यासले मानिसलाई फाइदा पुर्‍याए पनि पूर्णरुपमा भने पुर्‍याउदैन । शारीरिक अभ्यासका रुपमा जबसम्म योगलाई आत्मसात् गरिँदैन अरु कुनै उपायले त्यो सन्तुष्टि दिन सक्दैन । हाम्रो अस्थिर मनलाई स्थिर बनाउनु नै योग हो । हाम्रो मनमा अनेक प्रकारका राम्रा नराम्रा …
फोटोग्राफरको तस्वीर हेर्नुहोस्, तपाईंलाई रिङ्गटा लाग्नेछ
फोटोग्राफरको तस्वीर हेर्नुहोस्, तपाईंलाई रिङ्गटा लाग्नेछ एजेन्सी, भदौँ ४: कोहि फोटोग्राफर यस्ता हुन्छन् जो आफ्नो फोटोग्राफीको अरु निखारनका लागि आफ्नो ज्यानको समेत बाजी लगाएका हुन्छन् । फोटोग्राफर एंजेला निकोलौंले पनि फोटोग्राफीको गुण सिकेकी छन् । उनी फोटोको लागि जस्तै सुकै हदसम्म पनि जान सक्छिन् । एंजेलाले आफ्नो सेल्फी फोटो खिच्न कुनै पनि सीमा पार गर्छिन् …
बलिउड स्टार जसले आफ्नो नामै बदले
बलिउड स्टार जसले आफ्नो नामै बदले काठमाडौँ: नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नाम परिवर्तन गर्ने थुप्रै कलाकारहरु रहेका छन् । आफ्नो वास्तविक नाम परिवर्तन नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा मात्र नभई बलिउडमा समेत रहेको छ । थुपै बलिउड स्टारहरुले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेका छन् । बलिउड स्टार सलमान खान आफ्नो फिल्म, लव लाइफ र पारिवारिक विवादका साथै अन्य विविध कारणले चर्चामा आईरहेका हुन्छन् । आज हामी यहाँ भारतीय अनलाइन मिडियाले तयार पारेको बलिउड स्टारको वास्तविक नामको बारेमा चर्चा गछौं । २७ डिसेम्बर १९६५ मा जन्मिएका सलमान खानको वास्तविक नाम अब्दुल राशिद सलीम हो । बलिउडमा छिरेपछि उनले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेका हुन् …
बच्चा सुताउन गाह्रो छ ? यी टिप्सहरु अपनाउनुस्
बच्चा सुताउन गाह्रो छ ? यी टिप्सहरु अपनाउनुस् बच्चा समयमा नसुत्नाले आमाबाबुलाई समेत असर गर्दछ । प्राय बालबालिकाहरुमा कम समय सुत्ने र बढी बिउजिने एक अध्ययनले जनाएको छ । विभिन्न खोज अनुसन्धानले बच्चाको निद्रामा के कारणले असर पार्छ भन्ने यकिन निष्कर्ष अझै निकाल्न सकेका छैनन् । आज हामी यहाँ बालबालिकालाई सुताउनको लागि सहयोग गर्ने केहि टिप्सहरुको बारेमा चर्चा गर्दछौँ जसको सहयोगले आमाहरुलाई केहि सहजता प्रदान गर्दछ । शारीरिक गतिविधिमा ध्यान दिनुहोस् अधिकांश समय विद्यालयमा विताएपछि पनि बालबालिकाहरु घरमा आएर खेल्न मन पराउछन् । दिनभर नै हुने शारीरिक गतिविधिले बालबालिकालाई राम्रोसँग सुत्न सहयोग …